Inona no Hanampy Antsika ho “Vonona Hiandry” Foana? | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Vonona hiandry ... aho.”—MIKA 7:7.
Inona no ianarantsika avy amin’i Mika?
Inona avy ireo zavatra hitranga mbola andrasantsika?
Inona avy no azontsika atao mba hampisehoana fa mankasitraka ny faharetan’i Jehovah isika?
1. Nahoana isika no mety hanjary tsy hanam-paharetana?
NANOMBOKA ny andro faran’ny tontolon’i Satana, rehefa niorina ny Fanjakan’ny Mesia tamin’ny 1914. Nisy ady tany an-danitra, ka noroahin’i Jesosy ho etỳ an-tany ny Devoly sy ny demonia. (Vakio ny Apokalypsy 12:7-9.) Fantatr’i Satana fa “fohy ny fotoana ananany.” (Apok. 12:12) Efa ho 100 taona anefa izao io “fotoana” io, ka mety hisy hieritreritra hoe tena ela be ny andro farany. Ary isika? Lasa tsy manam-paharetana ve isika eo am-piandrasana an’i Jehovah hanao zavatra?
2 Mety hahita loza isika raha tsy manam-paharetana, satria atahorana hanaonao foana. Inona no hanampy antsika ho vonona hiandry foana? Hanampy antsika ity lahatsoratra ity, izay hamaly an’ireto fanontaniana ireto: 1) Inona no ianarantsika avy amin’i Mika mpaminany, ka hanampy antsika hanam-paharetana? 2) Inona ireo zavatra hitranga izay hamantarantsika fa mifarana ny fotoana iandrasantsika? 3) Ahoana no ampisehoantsika fa mankasitraka ny faharetan’i Jehovah isika?
3. Nanao ahoana ny fiainan’ny Israelita tamin’ny andron’i Mika?
3 Vakio ny Mika 7:2-6. Hitan’i Mika mpaminany fa niharatsy foana ny fifandraisan’ny Israelita tamin’i Jehovah. Lasa nanao zavatra faran’izay ratsy mihitsy aza izy ireo nandritra ny fitondran’i Ahaza, mpanjaka ratsy fanahy. Nampitovin’i Mika tamin’ny “voarointsilo” sy “fefy tsilo” ireo Israelita ireo. Haratra ny olona raha mandeha ao anaty voarointsilo sy fefy tsilo. Toy izany koa fa nahita loza izay rehetra nifandray tamin’ireo Israelita ratsy fanahy. Tena ratsy ny olona tamin’izany ka rava hatramin’ny fihavanan’ny mpianakavy. Fantatr’i Mika fa tsy hahavita hanova na inona na inona izy. Namboraka ny tao am-pony tamin’i Jehovah àry izy, ary niandry azy hanao zavatra. Natoky izy fa hanao zavatra i Jehovah amin’ny fotoana mety.
4. Inona avy ny zava-tsarotra mahazo antsika?
4 Voatery miara-miaina amin’ny olona tia tena koa isika ankehitriny, toa an’i Mika. Maro ny olona ‘tsy misaotra, tsy mena-mivadika, ary tsy tia ny mpianakaviny.’ (2 Tim. 3:2, 3) Kivy isika rehefa tia tena ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ary ny mpiray tanàna amintsika. Mbola mafy kokoa anefa ny manjo ny mpanompon’i Jehovah sasany. Nampitandrina i Jesosy fa hanohitra an’ireo mpianany ny fianakavian’izy ireo. Mitovy amin’ny voalazan’ny Mika 7:6 ny teny nolazainy. Hoy izy: “Tonga aho hampisaraka ny lehilahy amin’ny rainy, ny zanakavavy amin’ny reniny, ary ny vinantovavy amin’ny rafozambaviny. Ary ny ankohonan’ny olona ihany no ho fahavalony.” (Mat. 10:35, 36) Tena mafy ny miaritra ny fanesoana sy ny fanenjehan’ny mpianakavy tsy mitovy finoana amintsika. Aoka isika tsy hilavo lefona raha iharan’izany. Aoka kosa isika tsy hivadika mihitsy ary hiandry an’i Jehovah hamaha an’ilay olana. Homeny hery sy fahendrena ahafahana miaritra isika, raha mangataka foana ny fanampiany.
5, 6. Ahoana no namalian’i Jehovah soa an’i Mika? Inona anefa no tsy hitan’i Mika?
5 Namaly soa an’i Mika i Jehovah satria nanam-paharetana i Mika. Hitany ny nahafatesan’i Ahaza sy ny naharavan’ny fitondrany. Teo koa izy rehefa lasa mpanjaka i Hezekia, zanak’i Ahaza. Mpanjaka tsara i Hezekia ary namerina tamin’ny laoniny ny fivavahana madio. Tanteraka koa ny didim-pitsarana nasain’i Jehovah nambaran’i Mika momba an’i Samaria, rehefa nanafika ny fanjakan’ny Israely tany avaratra ny Asyrianina.—Mika 1:6.
6 Tsy nahita ny fahatanterahan’ny faminaniana rehetra nasain’i Jehovah nambarany anefa i Mika. Nanoratra toy izao, ohatra, izy: “Izao no tsy maintsy hitranga any am-parany: Ny tendrombohitra misy ny tranon’i Jehovah dia ho mafy orina sady ho avo noho ny tampon’ireo tendrombohitra, ka hasandratra ho avo noho ireo havoana. Ary hitanjozotra ho any ny olona. Maro ny firenena ho any, ka hanao hoe: ‘Avia! Andao isika hiakatra ho any an-tendrombohitr’i Jehovah.’ ” (Mika 4:1, 2) Efa ela be talohan’ny nahatanterahan’io faminaniana io no maty i Mika. Na izany aza, dia tapa-kevitra izy fa tsy hivadika amin’i Jehovah mandra-pahafatiny, na inona na inona nataon’ny olona. Hoy izy: “Ny firenena rehetra samy handeha amin’ny anaran’ny andriamaniny avy, fa isika kosa handeha amin’ny anaran’i Jehovah Andriamanitsika, mandritra ny fotoana tsy voafetra, eny, mandrakizay.” (Mika 4:5) Nahavita niandry foana i Mika nandritra ireny fotoan-tsarotra ireny, satria tena nino izy fa ho tanteraka izay rehetra nampanantenain’i Jehovah. Natoky an’i Jehovah izy.
7, 8. a) Nahoana isika no afaka matoky an’i Jehovah? b) Inona no tokony hataontsika raha tiantsika handalo haingana ny fotoana?
7 Matoky an’i Jehovah toa an’i Mika ve isika? Tokony ho izany no izy, satria ny masontsika mihitsy no mahita fa tanteraka ny faminanian’i Mika momba izay hitranga ‘atỳ am-parany.’ Olona an-tapitrisany avy amin’ny firenena sy foko ary fiteny rehetra no mirohotra mankany amin’ny “tendrombohitra misy ny tranon’i Jehovah.” Avy amin’ny firenena mifandrafy izy ireo, nefa ‘nanefy ny sabany ho angadinomby’, ary tsy mety ‘mianatra ady intsony.’ (Mika 4:3) Tena tia fihavanana ny vahoakan’i Jehovah, ary manana tombontsoa miavaka isika satria anisan’izy io.
8 Ara-dalàna raha tiantsika horinganin’i Jehovah haingana ity tontolo ratsy ity. Mila manana ny fomba fihevitr’i Jehovah anefa isika, raha te hanam-paharetana. Efa nanondro andro iray hitsarana ny olombelona izy, ary i Jesosy Kristy no “voatendriny” hanao izany. (Asa. 17:31) Manampy ny karazan’olona rehetra anefa aloha izy mba hahazo “fahalalana marina tsara ny fahamarinana” sy hampihatra an’izay ianarany, ka ho voavonjy. Aina maro no tandindomin-doza, ary sarobidy ny aina. (Vakio ny 1 Timoty 2:3, 4.) Raha variana manampy ny olona hahalala ny marina momba an’Andriamanitra isika, dia handalo haingana kokoa ny fotoana iandrasantsika ny andro ampiharan’i Jehovah ny didim-pitsarany. Tsy ho hitahitantsika akory amin’izay dia ho tonga ny farany, ary ho tampoka amintsika mihitsy aza. Ho faly be isika satria variana tamin’ny fitoriana an’ilay Fanjakana.
AHOANA NO HAMANTARANA FA MIFARANA NY FOTOANA IANDRASANA?
9-11. Efa tanteraka ve ny 1 Tesalonianina 5:3? Hazavao.
9 Vakio ny 1 Tesalonianina 5:1-3. Tsy ho ela dia hilaza ireo firenena hoe: “Fandriampahalemana sy filaminana!” Mila ‘mifoha hatrany sy misaina tsara foana’ isika, raha tsy tiantsika ho tampoka amintsika izany. (1 Tes. 5:6) Andeha isika hijery ireo zava-nitranga efa nialoha an’io fanambarana io, mba hanampiana antsika hifoha ara-panahy foana.
10 Nikatsaka fandriampahalemana ireo firenena, isaky ny nifarana ny Ady Lehibe. Taorian’ny Ady Lehibe I, ohatra, dia natsangana ny Fikambanam-pirenena, izay nantenaina hitondra fandriampahalemana. Taorian’ny Ady Lehibe II indray, dia ny Firenena Mikambana no nantenain’ny maro hitondra an’izany. Niandrandra an’ireo fikambanana ireo mba hitondra fandriampahalemana ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana. Hita, ohatra, izany rehefa neken’ny Firenena Mikambana ho Taona Iraisam-pirenena ho An’ny Fandriampahalemana ny taona 1986, ary nambara hatraiza hatraiza izany. Nisy filoham-pirenena sy mpitondra fivavahana avy amin’ny firenena maro tonga tany Assise, any Italia, tamin’io taona io. Nivory niaraka tamin’ny lehiben’ny Fivavahana Katolika izy ireo, ary nivavaka mba hisian’ny fandriampahalemana.
11 Marina fa azo lazaina hoe fanambarana momba ny fandriampahalemana sy filaminana iny tamin’ny 1986 iny, ary nisy zava-nitranga hafa nitovitovy tamin’izy iny koa. Tsy manatanteraka ny 1 Tesalonianina 5:3 anefa ireny. Nahoana? Satria mbola tsy nitranga ilay “fandringanana tampoka.”
12. Inona no azontsika antoka momba an’ilay fanambarana hoe “Fandriampahalemana sy filaminana”?
12 Iza no hanao an’ilay fanambarana lehibe hoe “Fandriampahalemana sy filaminana”? Inona no hataon’ireo mpitarika ao amin’ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina sy ny fivavahana hafa, mifandray amin’io fanambarana io? Ary inona no hataon’ireo mpitondra fanjakana samihafa mba hanatanterahana an’ilay fanambarana? Tsy milaza ny valin’ireo ny Baiboly. Azo antoka anefa fa tsy tena hisy fandriampahalemana sy filaminana amin’izay, na ahoana na ahoana fomba hisehoan’ilay fanambarana ary na mandresy lahatra toy inona aza ilay izy. Mbola ho eo ambany fahefan’i Satana foana ity tontolo ity. Efa tena ratsy izy ity, ary tsy hihatsara intsony. Hampalahelo tokoa raha mino an’ilay fampielezan-kevitr’i Satana isika, ka hanjary hitsabaka amin’ny politika!
13. Nahoana ireo anjely no mihazona ny rivotry ny fandringanana?
13 Vakio ny Apokalypsy 7:1-4. Mandra-pahatanteraky ny 1 Tesalonianina 5:3, dia misy anjely mahery mihazona ny rivotry ny fandringanana mba tsy hipoahan’ny fahoriana lehibe. Inona no andrasan’izy ireo? Ny fanisiana tombo-kase farany an’ireo voahosotra ‘mpanompon’Andriamanitra’, araka ny voalazan’ny apostoly Jaona. * Havotsotr’ireo anjely ny rivotry ny fandringanana, rehefa vita izany. Inona no hitranga avy eo?
14. Inona no mampiseho fa efa akaiky ny fandringanana an’i Babylona Lehibe?
14 Horinganina i Babylona Lehibe, izany hoe ny fivavahan-diso maneran-tany, satria izay no sahaza azy. Tsy ho afaka hiaro azy ny “olona sy vahoaka sy firenena ary olona samy hafa fiteny”, amin’izay fotoana izay. Efa hitantsika sahady hoe tsy ho ela intsony izany fandringanana izany. (Apok. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Efa mihabetsaka izao ny olona manakiana ny fivavahana sy ny mpitondra fivavahana, ao amin’ny fampitam-baovao. Mbola mieritreritra ihany anefa ireo mpitondra fivavahana fa tsy misy atahorana. Tena diso hevitra izy ireo! Hamely tampoka an’ireo fivavahan-diso sy handringana azy tanteraka ny fitondrana ara-politika rehetra, aorian’ilay fanambarana hoe “Fandriampahalemana sy filaminana!” Tsy ho hita intsony i Babylona Lehibe! Tena tokony hanam-paharetana àry isika, ka hiandry izany fotoan-dehibe izany.—Apok. 18:8, 10.
ASEHOY FA MANKASITRAKA NY FAHARETAN’I JEHOVAH IANAO
15. Nahoana i Jehovah no tsy maimaika hanao zavatra?
15 Tena manala baraka ny anaran’i Jehovah ny olona, nefa mbola manam-paharetana izy, ka miandry ny fotoana mety mba hanaovan-javatra. Tsy tian’i Jehovah hisy ho ringana ny olona tso-po. (2 Pet. 3:9, 10) Toy izany koa ve isika? Misy zavatra azontsika atao ireto alohan’ny hahatongavan’ny andron’i Jehovah, mba hampisehoana fa mankasitraka ny faharetany isika.
16, 17. a) Nahoana isika no tokony hanampy ny olona tsy mitory intsony? b) Nahoana ny olona tsy mitory intsony no mila miverina haingana amin’i Jehovah?
16 Ampio ireo tsy mitory intsony. Nilaza i Jesosy fa misy fifaliana any an-danitra na dia ondry very iray monja aza no hita. (Mat. 18:14; Lioka 15:3-7) Hita àry fa tena miahy an’izay rehetra nampiseho fitiavana ny anarany i Jehovah, na dia tsy mitory intsony aza izy ireny izao. Manao izay hahafaly an’i Jehovah sy ny anjely isika, rehefa manampy an’ireny olona ireny mba hiara-manompo amin’ny fiangonana indray.
17 Anisan’ireo tsy mitory intsony ve ianao? Nisy olona nahasosotra anao angamba teo anivon’ny fiangonana, ka tsy niaraka tamin’ny fandaminan’i Jehovah intsony ianao. Mety ho efa elaela izay no lasa, ka ilaina ny mieritreritra hoe: ‘Misy dikany kokoa ve ny fiainako izao, ary sambatra kokoa ve aho? I Jehovah ve no nanafintohina ahy sa olona tsy lavorary? Efa nanisy ratsy ahy ve i Jehovah?’ Manao soa amintsika foana i Jehovah, raha ny marina. Avelany hankafy an’ireo zava-tsoa omeny isika, na dia tsy mitana ny voady nataontsika tamintsika nanokan-tena aza. (Jak. 1:16, 17) Efa akaiky ny andron’i Jehovah. Izao no fotoana tokony hiverenana amin’ilay Raintsika be fitiavana sy hiarahana indray amin’ny fiangonana. Ao ihany no toerana azo antoka, amin’izao andro farany izao.—Deot. 33:27; Heb. 10:24, 25.
Miezaka mafy isika hanampy ireo tsy mitory intsony mba hiverina amin’i Jehovah (Fehintsoratra 16, 17)
18. Nahoana isika no tokony hankatò an’ireo mitarika antsika?
18 Mankatoava foana an’ireo mitarika antsika. Mitarika sy miaro antsika i Jehovah, toy ny ataon’ny mpiandry ondry be fitiavana. Notendreny ho Lehiben’ny Mpiandry ny Zanany. (1 Pet. 5:4) Miahy ny ondrin’Andriamanitra tsirairay ireo mpiandry na anti-panahy any amin’ny fiangonana 100 000 mahery. (Asa. 20:28) Hita hoe mankasitraka an’izay rehetra nataon’i Jehovah sy Jesosy ho antsika isika, rehefa mankatò foana an’ireo voatendry hitarika antsika.
19. Inona no tokony hataontsika mba hahatonga antsika hiray hina?
19 Miezaha hiray hina. Ahoana no hanaovana an’izany? Eritrereto ny tafika iray tsara ofana. Ahoana no ataony rehefa manafika azy ny fahavalo? Mifanatona akaiky kokoa ireo miaramila, ka lasa sarotra amin’ny fahavalo ny mandresy azy. Mafy kokoa ny fanafihan’i Satana ny vahoakan’Andriamanitra ankehitriny. Tsy fotoana tokony hiadiana amin’ny mpiray finoana amintsika àry izao. Tokony hifandray akaiky kosa isika, tsy hifantoka amin’ny tsy fahalavorarian’ny hafa, ary hatoky ny fitarihan’i Jehovah.
Aoka isika hiray hina hanohitra an’i Satana sy ny demonia (Fehintsoratra 19)
20. Inona no tokony hataontsika izao?
20 Tena tokony hiambina foana sy ho vonona hiandry àry isika rehetra. Manàna faharetana eo am-piandrasana an’ilay fanambarana hoe “Fandriampahalemana sy filaminana!”, sy ilay fanisiana tombo-kase farany an’ireo olom-boafidin’Andriamanitra. Havotsotr’ireo anjely efatra ny rivotry ny fandringanana aorian’izay, ka horinganina i Babylona Lehibe. Ankatoavy ny toromarik’ireo voatendry hitarika eo anivon’ny fandaminan’i Jehovah, eo am-piandrasana an’izany rehetra izany. Aoka koa isika hiray hina hanohitra ny Devoly sy ny demonia. Izao no fotoana tokony hanarahana an’ilay torohevitry ny mpanao salamo hoe: “Manàna herim-po ary hatanjaho ny fonareo, dia ianareo rehetra izay miandry an’i Jehovah.”—Sal. 31:24.
^ feh. 13 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana 1 Janoary 2007, pejy 30-31, mba hahitana ny maha samy hafa ny fanisiana tombo-kase voalohany sy ny fanisiana tombo-kase farany an’ireo voahosotra.